Uyintoni umahluko phakathi kwefayibha ebonakalayo kunye nentambo yokubonakalayo-Iindaba-Zhejiang Chaolian Electronic Co, Ltd.
1 Inkcazo yekhebula elibonakalayo
2 Ukuhlelwa kweentambo ezibonakalayo
Ngokwemimandla yokusetyenziswa eyahlukeneyo, iintambo zamehlo zinokwahlulwa zibe ziintambo ezibonakalayo zangaphakathi kunye neentambo zangaphandle zamehlo.
Iimpawu ze-cable optical
Intambo ebonakalayo yangaphakathi yintambo eyenziwe yifayibha ebonakalayo (isithuthi sokuhambisa umbane) ngenkqubo ethile. Iqulathe ikakhulu imicu ebonakalayo (intambo yeglasi encinci ezinjengeenwele), imikhono yokukhusela yeplastiki kunye neeplastiki. Akukho sinyithi sinje ngegolide, isilivere, ubhedu kunye nealuminium kwikhebula elibonakalayo, kwaye ngokubanzi alinaxabiso lokurisayikilisha.
Intambo ebonakalayo ye-Optical luhlobo lonxibelelwano oluqonda ukuhanjiswa kwesiginali ebonakalayo. Isiseko sekhebula senziwe ngenani elithile leentsinga zamehlo ngendlela ethile, kwaye sigutyungelwe ngesingxobo, kwaye ezinye zigqunywe ngomthi ongaphandle.
4 Iimpawu zodidi ngalunye lwekhebula elibonakalayo
Iimpawu zekhebula lokungena ngaphakathi: Amandla eqine wekhebula yangaphakathi ebonakalayo incinci, umaleko okhuselayo ulihlwempu, kodwa ulula kwaye uqoqosho ngakumbi. Iintambo zangaphakathi ezibonisa ubukhulu becala zilungele iinkqubo ezisezantsi zeentambo kunye nenkqubo yemiqolo ethe nkqo ethe nkqo. Iintambo zombane zangaphandle zisetyenziswa ikakhulu kwinkqubo esezantsi yeqela lokwakha, kwaye zinokusetyenziselwa ukungcwaba ngaphandle ngokuthe ngqo, ipayipi, ngaphezulu nangaphezulu nokubekwa emanzini kunye nezinye izihlandlo.
Iimpawu zentambo ye-optical yangaphandle: Iqulathe ikakhulu ifayibha ebonakalayo (intambo yeglasi ebhityileyo enjengeenwele), umkhono weplastiki okhuselayo kunye nesingxobo seplastiki. Akukho sinyithi sinje ngegolide, isilivere, ubhedu kunye nealuminium kwikhebula elibonakalayo, kwaye ngokubanzi alinaxabiso lokurisayikilisha. Iintambo zefibre optic zangaphandle zinamandla aphezulu okuqina, umaleko okhuselayo otyebileyo, kwaye zihlala zixhobile (oko kukuthi, zisongelwe ngesikhumba sensimbi). Iintambo ezibonakalayo zangaphandle zilungele ikakhulu unxibelelwano phakathi kwezakhiwo naphakathi konxibelelwano olukude.